2013 – Year – Channel Myanmar
Lone Survivor (2013) Lone Survivor (2013) IMDb - 7.5/10_____Rotten - 74% ဒီတစ်ခါတော့ စစ်ကားကြိုက်ပရိတ်သတ်တွေအတွက် စစ်ကားကောင်း တစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ၂၀၁၄ အစရဲ့ အက်ရှင်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကားက တကယ့် ဖြစ်ရပ်မှန် Red Wings Operation ကို ဇာတ်အိမ်တည်ရိုက်ကူးထားပြီး၊ ကျဆုံးသွားတဲ့ စစ်သားတွေကို အမှတ်တရ ဂုဏ်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းကတော့ Trailer မှာပါတဲ့အတိုင်း Navy SEAL လေးယောက်က တာလီဘန် ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်ကို အပြတ်ရှင်းဖို့ သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ ရှိနေတဲ့နေရာကို ဆိတ်ကျောင်းသား သားအဖကရောက်လာ ပြီးတွေ့သွားတဲ့အခါမှာတော့ Rules of Engagement (စစ်ပွဲတစ်ပွဲရဲ့စည်းကမ်းတွေလို့ ယေဘူယျ ဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်) အရ ကလေးတွေ၊ လက်နှက်ကိုင် မဟုတ်တဲ့ အရပ်သားတွေကို မသတ်ပဲ ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲ့လိုပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ရင် သူတို့ နောက်မှာ တာလီဘန် တွေလိုက်လာမှာကို ...
Aashiqui2(2013) Aashiqui2(2013)_____IMDb - 7.0/10 ဒီကားလေးကတော့ IMDb7ရရှိထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားပါပဲ အဆိုတော်တစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝအနိမ့်အမြင့် အတက်အကျတွေကို သင်ခန်းစာ ယူဖွယ် ဆွတ်ပျံ့ကြည်နူးဖွယ် ရိုက်ကူးပြထားတာပါ။ reviewတွေထဲမှာတော့ သင်တို့ရဲ့ ဒီဇာတ်ကားဟာ မျက်ဝန်းတွေကို စိုစွတ်စေပြီး အာခေါင်တွေကိုခြောက်သွေ့သွားစေနိုင်တယ်လို့တောင်ဆိုထားပါတယ်။ အရက်ကြောင့် ပျက်စီးလုနီးပါးဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ဂုဏ်သတင်းကို ဘယ်လို ထိမ်းသိမ်းခဲ့တယ် ကိုယ့်ရဲ့ ဘဝလက်တွဲဖော် ချစ်သူဆိုတာ ကိုယ့်ဘဝမှာ ဘယ်လောက်အရေးပါတယ်ဆိုတာ ဒီဇာတ်ကားက အဓိက ဇာတ်ဆောင်က အကောင်းဆုံး ချပြသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ချစ် ပရိသတ်တွေ လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ ရိုမန့်တစ်ဇာတ်ကားကောင်းလေးပါ။(အညွန်းရေးပေးသူကတော့ ကောင်းမြတ်သူပဲ ဖြစ်ပါတယ်) ဒီကားေလးကေတာ့ IMDb7ရရွိထားတဲ့ ဇာတ္ကားေလးတစ္ကားပါပဲ အဆိုေတာ္တစ္ေယာက္ရဲ႕ ဘ၀အနိမ့္အျမင့္ အတက္အက်ေတြကို သင္ခန္းစာ ယူဖြယ္ ဆြတ္ပ်ံ႕ၾကည္ႏူးဖြယ္ ရိုက္ကူးျပထားတာပါ။ reviewေတြထဲမွာေတာ့ သင္တို႔ရဲ႕ ဒီဇာတ္ကားဟာ မ်က္ဝန္းေတြကို စိုစြတ္ေစၿပီး အာေခါင္ေတြကိုေျခာက္ေသြ႕သြားေစႏိုင္တယ္လို႔ေတာင္ဆိုထားပါတယ္။ အရက္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးလုနီးပါးျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ ကိုယ့္ရဲ႕ ဂုဏ္သတင္းကို ဘယ္လို ထိမ္းသိမ္းခဲ့တယ္ ...
The Colony (2013) The Colony (2013)_____IMDb - 5.3/10 ဒီ တစ်ခါတော့ သည်းထိတ်ရင်ဖို ဇာတ်ကားလေးတစ်ကား တင်ဆက်ပေးလိုက်ပြီဗျို့!!!၂၀၄၅ကို သွားလိုက်ကြစို့ ၂၀၄၅ ကို ရောက်ပြီ။ လူတွေ ဟာ ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးလာမှုကို ထိန်းချုပ်ဖို့ နည်းတစ်ခုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ အဲ့တာကတော့ ရာသီဥတု ထိန်းချုပ်စက် ကြီး တီထွင်နိုင်ခဲ့တာပါပဲ။ကိုယ့်ရှူး ကိုယ်ပတ် တယ်ပဲ ပြောရမလား တစ်ရက်ကျတော့ အဲ့စက်ကြီး ချွတ်ယွင်း လာပါတော့တယ်။ နှင်းတွေ အဆက်မပြတ် ကျနေတာ ဘယ်လိုမှ ရပ်တန့်လို့မရတော့ဘူးပေါ့ဗျာ။လူတချို့ကတော့ အလွန်ပြင်းထန်လှတဲ့အအေးဒဏ်ကို ခံနိုင်ဖို့ မြေအောက် လှိုင်ခေါင်းတွေ ထဲ ဝင်ရောက် နေထိုင် ကြပါတော့တယ်။ ဒီမှာပြဿနာက စပြီ။ ဒီလှိုင်ခေါင်းတွေအောက်မှာ ရောဂါကူးစက်မှုနဲ့ အစာရေစာ ပြတ်လပ်မှု တွေကို ထိန်းချုပ်ဖို့ လိုအပ်လာပြီလေ။စစ်သားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Briggs (Laurence Fishburne) နဲ့ Manson (Bill Paxton)တို့ဟာ မြေအောက်နေလူသား ...
Horns 2013 Screen Shots Harry Potter မင္းသား Daniel Radcliffe အဓိကပါဝင္သရုပ္ေဆာင္ထားတဲ့ Drama | Fantasy | Thriller ဇာတ္ကားပါ။ ဒင္နီရယ္လ္ရတ္ကလဖ္ ပရိတ္သတ္နဲ႕ ထူးထူးဆန္းဆန္း ဇာတ္လမ္းၾကိဳက္တဲ့ ပရိတ္သတ္ေတြ စိတ္ဝင္စားမယ့္ ဇာတ္ကားမ်ိဳးပါ.... IMDb Rating(6.5/10) ရရွိထားပါတယ္။ File size...800MB Quality....WEB-DL Rip 720p Format...mp4 Duration....01:59:55 Subtitle....Myanmar Subtitle (Hardsub) Encoder....Nyeinsaeya Aung
Bhaag Milkha Bhaag (2013) Bhaag Milkha Bhaag (2013) IMDb - 8.2/10_____Rotten - 72%ကျွန်တော် အကိုတို့ blog ကနေပြီးတော့ movies တွေ အမြဲတမ်းကြည့်ဖြစ်ပါတယ် .. အကိုတို့ဘလော့လေးကို သဘောလဲကျမိပါတယ်.. အဲ့အတွက် ကျွန်တော်လည်း တတ်နိုင်သမျှပြန်ကူညီတဲ့အနေနဲ့ ဇာတ်ကား တစ်ကားကို ဘာသာပြန်ပြီး အကိုတို့ကို ပေးလိုက်ပါတယ် .. ဇာတ်လမ်းလေးကလည်း အထုပ္ပတ္တိ ကားလေးလည်းဖြစ်.. တော်တော်လေးလည်းကောင်း.ဘဝအတွက်လည်း message တွေအများကြီးပေးပါတယ်..ပြီးတော့ မြန်မာလို ပြန်ထားတာ မတွေ့သေးတဲ့အတွက် ကျွန်တော်ပြန်ပြီး ပို့ပေးလိုက်တာပါ .. ဇာတ်လမ်းက ၂၀၁၃ ခုနှစ်က ထွက်တဲ့ Bhaag Milkha Bhaag ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ .. အကိုတို့လဲ ကြည့်ဖူးပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်...ဇာတ်လမ်းက ၃ နာရီကြာတော့ ဆိုဒ်ကလည်း နဲနဲကြီးသွားတယ်2Gb နည်းနည်းကျော်သွားပါတယ်....ဇာတ်လမ်းအညွှန်းက Movie Locos ကနေကူးယူပြီး ပေးလိုက်ပါတယ်.. ================================================၁၉၄၇ ...